Nayijeriya - ALinks
Uyifumana njani i-visa eNigeria?
January 9, 2022 UAntika Kumari Nayijeriya, ivisa
Inkqubo yeVisa eNigeria ilula kakhulu. Inkqubo yokwenza isicelo sevisa yaseNigeria sele yenziwe ngoku kwi-Intanethi. Kukho izinto ezithile ekufuneka uzazi ngaphambi kokufaka isicelo sevisa, njengoko kukho amazwe athile abemi bawo
Iidyunivesithi ezigqibelele eNigeria
Disemba 15, 2020 UMaitri Jha Nayijeriya, isifundo
INigeria inamaziko amaninzi karhulumente nawabucala. Ngokwengxelo ye-UNISA, kukho iiyunivesithi ezili-162 eNigeria. Imirhumo yonyaka kwiiyunivesithi zikawonkewonke iphantse ya- $ 125- $ 500. Nangona kunjalo, iiyunivesithi zabucala zibiza umndilili we- $ 2,700 ngonyaka. Nayijeriya
Inkqubo yokuThutha eNigeria !!
Ngamana 17, 2020 IShubham Sharma yibakhona, Nayijeriya
Ukuhamba eNigeria kubandakanya zonke iindlela ezine. Uninzi lwabemi luxhomekeke kuthungelwano lwendlela kuthutho lwabo. Ngaphezu kwe-80% yabemi basebenzisa izithuthi zendlela kuphela xa behamba. INigeria nayo inethiwekhi enkulu kakhulu
Iindleko Of Living In Nigeria
Disemba 6, 2019 IShubham Sharma imali, Nayijeriya
Iindawo zokutyela [Hlela] Isidlo sangokuhlwa, Indawo yokutyela engabizi 500.00 ₦ 362.30-1,000.00 Isidlo sabantu aba-2, Indawo yokutyela esembindini, Iikhosi ezintathu 6,000.00 ₦ 3,500.00-12,000.00 McMeal eMcDonalds (okanye isidlo esilinganayo seCombo) 1,600.00 ₦ 1,450.00-2,500.00 Beer yasekhaya (0.5 Idrafti yelitha) 300.00 ₦ 250.00-500.00 Utywala obungenisiweyo (Ibhotile yeelitha ezingama-0.33)
Shopping ezinkulu In Nigeria
Disemba 6, 2019 UKaruna Chandna Nayijeriya, izinto zokwenza
I-Tinapa Shopping Resort I-Tinapa Shopping Resort yindawo enkulu yokuthenga, enendawo ekuthengiswa kuyo yonke indawo igubungela umgama ongaphezulu kwe-861,000 yeenyawo, okwenza ukuba ibe yeyona ndawo inkulu yeevenkile eNigeria, kwaye phakathi kwezona zinkulu e-Afrika. Ivenkile yokuthenga ikwindawo
Ihotele eziphezulu ezi-5 eNigeria
Disemba 6, 2019 UAntika Kumari iihotele, Nayijeriya
1. I-FALEDAL PALACE HOTEL LAGOS: Yaziwa njengenye yehotele ezintlanu ezindala kunye nezindala ezintlanu eLagos, iFederal Palace Hotel inikezela ngeyona ndlela ifanelekileyo yokunethezeka kubakhenkethi kunye nakwiindwendwe ezifanayo. Nokuba ungakanani na, ihotele yeyangoku kwaye
BEST IXESHA TO GO TO ENIGERIA
Disemba 6, 2019 IShubham Sharma Nayijeriya, hamba
Elona xesha lilungileyo lokuya eNigeria lixesha lika-Nov-Jan lowomileyo. Eli lilizwe elikhulu, nangona kunjalo, kwaye imeko yemozulu iyahluka kakhulu ngokokuma kunye nokuphakama; eyiSahel eyomileyo emantla ibona imvula encinci, ukuqala
Njengomhambi wentshatsheli, ixabiso eliphakathi leentsuku ezi-7 zokuya wedwa eNigeria ziya kubiza i-1,722 yeedola. Nangona kunjalo, uhambo losapho luya kubiza i-954 yeedola. Iihotele zaseNigeria zisukela kwi- $ 27 ukuya kwi- $ 128 ngobusuku. Kodwa, kuyo yonke indawo yokuhlala iholide,
Iinkonzo ezigqibeleleyo zeBhanki eNigeria
Novemba 29, 2019 IShubham Sharma imali, Nayijeriya
Iibhanki zaseNigeria ziyagxotha iinkonzo zemali ukuze kuxhamle abathengi bazo kunye nokutsala ngakumbi. Ezi bhanki zorhwebo zinelayisensi yokusebenza yi-Central Bank yaseNigeria (CBN) abagcinanga nje ngokugcina igama eliqinileyo kwindawo yasebhankini.
Iindawo ezintle zabakhenkethi abatyelele eNigeria !!
Novemba 29, 2019 IShubham Sharma Nayijeriya, izinto zokwenza
INigeria lelinye lamazwe ehlabathi asikelelekileyo ngezinto ezintle zokhenketho. Ngapha koko, ukhenketho yenye yezona zinto ziphambili zengeniso eNigeria. Ngelishwa ngelishwa ukuba amaNigeria amaninzi aphulukana nawo